CNaPS Nosokafana tany ambositra ny taom-piasana 2019
Taorian’ny fahazoan'ny CNaPS ny fankasitrahana iraisam-pirenena momba ny fahaiza-mitantana avy amin'ny AISS tany Génève dia tsy mitsahatra ny manatsara ny tolotra omeny ny Tahirim-pirenena ka nosokafana tao Ambositra ,faritra amoron'i Mania ny taom-piasana 2019 ka hetsika maro sosona no notanterahina tamin’izany nandritra ny telo andro.
Fanorenana tsy ara-dalàna eny 67 Ha Mampatahotra ireo mponina
Mampitaraina ny vahoaka monina eny amin’ny 67ha Ankasina ny fisian’ny trano iray miorina tsy ara-dalàna eny an-toerana.
Mpiasan’ny Sirama Brickaville sy Nosy be Mangataka ny fanafoanana ny fiaraha-miasa amin’ny Cie Vidzar
Tantara lavabe no notaterin’ireo solontenan’ny mpiasan’ny Sirama avy any Brickaville sy avy any Nosy be niisa 10 tonga eto Antananarivo nirahan’ireo namany ka hitatitra ny zava-nisy marina naharary azy ireo ao amin’ireto orinasa ireto noho ny fikorontanam-piainam-pianakaviana vokatry ny
Nafindra moramora eny amin’ny INFP sy ny kianja mitafon’i Mahamasina izy ireo araka izany, famindran-toerana tsotra hahafahana miaro ny ain’izy ireo fotsiny fa tsy misy resaka fandrodanana trano, akory. Ny miaramila raha ny fantatra no hiantoka ny fiambenana ny tranon’izy ireo raha ireo karazan’entana tsy afa-miala toy ny fitafiana sy ny lamba firakotra sisa no tsy maintsy entina. Nambaran’ny renim-pianakaviana iray fa nijanona hatreo ilay resaka fandravana trano izay tena nampisavoritaka ny mponina tokoa. Nalana ihany koa ilay peta-drindrina niparitaka teny rehetra teny raha ny fanazavany, fa nosoloina vaovao. Asa fanadiovana no fantatra, hoy izy fa hataon’ny fokontany sy ireo tompon’andraikitra maro samihafa ka ao anatin’izany no hahafahan’izy ireo mamoaka sy mamaritra marina ireo toerana tsy maintsy hialana hahafahana misoroka ny loza mety hitranga tampoka. Tamin’ny ankapobeny dia maro tamin’ireo olona voakasika no nandefitra rehefa nahare fa tsy horavana ny tranony raha nisy ihany ireo mbola nanda. Ho fitsinjovana ny asa fiveloman’izy ireo sy ny fianaran-janany moa no antony nametrahana azy ireo manodidina an’i Mahamasina ihany.